မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်တွေတွေ့မြင်လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Nissan 400 Z ရဲ့ Production Version ! – MyMedia Myanmar
မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်တွေတွေ့မြင်လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Nissan 400 Z ရဲ့ Production Version !
Nissan ရဲ့ Z Proto အမျိုးအစားကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ ‌လ လောက် တုန်းက ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းရင့် ကား အကောင်းစား တစ်စီးဖြစ်တဲ့ 370 Z နေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ကားအသစ် တစ်စီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 400 Z လို့ နာမည် ပေးထားနိုင်တဲ့ Production Sports Coupe ရဲ့ Prototype အနေနဲ့ ထွက်ရှိ လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် Z Proto ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းဟာ အများကြီးတော့ ပြောင်းလဲ မသွားနိုင်ပါဘူး။ Nissan ရဲ့ Chief Product Specialist တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Hiroshi Tamura ရဲ့ အတည် ပြုချက် အရတော့ Z Proto ရဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်းဟာ ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့်ကားအတွက် ဆိုရင်လည်း ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုပြီး သေချာသွားစေတဲ့ အချက်ကတော့ Production 400 Z အတွက် Nissan ဘက်က တင်သွင်းထားတဲ့ Patent File တွေမှာ ကားရဲ့ပုံရိပ်ကို မြင်လိုက်ရတာ ကြောင့်ပါပဲ။
အဆိုပါ ပုံရိပ်မှာ အသေးစိတ် အချက်အလက် အပြင်အဆင်တွေ ပါဝင်ထားခြင်း မရှိပေမယ့်လည်း အဆိုပါ ပုံရိပ်တွေကတော့ Z Proto ရဲ့ ဒီဇိုင်း ပိုင်း ကို Showroom တွေ အဆီ အရောက် ခေါ်ဆောင် လာမယ့် အသွင်ဆိုတာ သေချာလို့ နေပါပြီ။ မီးခိုးရောင်နဲ့ ပုံဖော်ထားတဲ့ အဆိုပါ ပုံရိပ်တွေ အရဆိုရင် Production 400 Z ကား သာ ယခင် Prototype ရဲ့ ထူထူထဲထဲ ရှိလှတဲ့ အရှေ့ဘက်က Grille တွေ ၊ Teardrop ပုံစံ နဲ့ Headlights တွေ နဲ့ Tailpipe တွေ အတွက် ဖန်တီးထားတဲ့ Dual Cutaway တွေ ကိုပါ တစ်ပုံစံတည်း မြင်တွေ့နေရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ပါးလွှာတဲ့ Silhouette အပိုင်းမှာ လည်း အတူတူပဲ ဖြစ်သလို Tapering Roof ပါဝင်လာတာကအစ တူညီလို့ နေပြန်ပါ တယ်။ ဒါ့ပေမယ့် လည်း အသေးစိတ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ Production အဆင့် ကား တစ်စီးအတွက် လိုအပ်မယ့် အရာ တွေကိုထပ်မံ ပေါင်းထည့်လာနိုင်တာ တွေ့ရပြီး Front Grille ရဲ့ အောက်ဘက်က Radar Sensor လို ဟာမျိုးတွေ Side Reflector တွေ နဲ့ Parking Sensors တွေ ကိုတော့ ထည့်သွင်း ပေးလာမှာပါ။ အရှေ့ဘက်မှာ ပါဝင်လာမယ့် Sensor တွေ ကတော့ Adaptive Cruise Control စနစ် အသစ် အတွက် အသုံးဝင် အောင် ဖန်တီးပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ခြုံကြည့်ရမယ် ဆိုရင်တော့ အခု လိုမျိုး ဖန်တီးမှုဟာ Z Proto ကို ကြိုက်နှစ် သက်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို သတင်းကောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပြီး Nissan ဘက်ကနေ ပိုပြီးတော့ လေးနက်တဲ့ အသွင် သဏ္ဍာန် နဲ့ မတူညီတဲ့ ကားတစ်စီးကို ထုတ်လုပ်ပေးလာမယ်လို့ ယူဆထားခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်ကတော့ အနည်းငယ် စိတ်ပျက်စ ရာ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် လူတိုင်းကလည်း အဆိုပါကားရဲ့ Gaping Grille ကို ကြိုက်နှစ်သက် ကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်လောက်ကြပါဘူး။
တစ်ခုရှိတာကတော့ အခုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့ Patent Image တွေမှာ မမြင်ရတာက ကားရဲ့အတွင်းခန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကားရဲ့ အပြင် ဘက်ကိုလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ အနည်းငယ်သာ လုပ်ထား တာ မို့လို့ Production 400 Z ရဲ့ အတွင်းခန်း Cabin အပိုင်း ဟာလည်း Prototype တုန်းက နဲ့ အတော်လေး ကို ဆင်တူလာနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Z Proto ရဲ့ အတွင်းခန်း မှာ Sport ဆန်တဲ့ Layout ကိုမှ 12.3 လက်မ အရွယ်ရှိတဲ့ Digital Instrument Cluster ကို တပ်ဆင် ပေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပိုကြီးတဲ့ Central Touchscreen Display ကိုလည်း မြင်တွေ့ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု 400 Z ရဲ့ အချို့သော အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ၊ အင်ဂျင်ပိုင်းတွေ ကိုတော့ မသိရှိ ရသေးပေမယ့် Twin-Turbo V6အင်ဂျင် ကိုပဲ တပ်ဆင်လာမယ် လို့ မျှော်လင့်ရပြီး 400 hp လောက် အထိ စွမ်းဆောင်ရည် ရှိလာနိုင်ကာ Six-Speed Manual Gearbox ဒါမှမဟုတ် Automatic စနစ်ကိုလည်း ရွေးချယ်စရာ အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးလာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကား အနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုတာနဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွေဆီက Classics JDM Sports Car တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုလိုမျိုး အမှတ် ရစရာ ရောင်းအားယှဉ်ပြိုင်မှု အနေနဲ့ Toyota GR Supra နဲ့ ထိပ်တိုက် ယှဉ်ပြိုင်ရနိုင် တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
The post မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်တွေတွေ့မြင်လာရပြီ ဖြစ်တဲ့ Nissan 400 Z ရဲ့ Production Version ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-15T15:30:59+06:30January 15th, 2021|MYCARS MYANMAR|